Awoodii Ahlusunna ee gobollada dhexe oo si buuxda uburburtay “Dhuusamareeb oo ciidan kale lawareegay”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaAwoodii Ahlusunna ee gobollada dhexe oo si buuxda uburburtay “Dhuusamareeb oo ciidan kale lawareegay”.
Awoodii Ahlusunna ee gobollada dhexe oo si buuxda uburburtay “Dhuusamareeb oo ciidan kale lawareegay”.
August 30, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 2
Galmudug ayaa guud ahaan ka baxday Gacanta Ururka Ahlusunna waxaana magaalada Si buuxda ula wareegay ciidamo Boolis ah oo Xamar laga qaaday iyo ciidanka Dowladda Jabuuti ee Hiil Walaal oo maanta gaaray degmooyinka Guriceel, Matabaan iyo Dhuusamareeb.
Waxaa sidoo kale magaalada maanta ka degtay diyaarad siday Ciidamo ka mid ah Booliska sida gaarka ah u tababaran waxayna arimahaas muujinayaan in ay burburtay awoodii ahlusunna ee gobolka.
Awoodii Habargidir Koonfurta/ Iyo Gobolladex\_dhex Oo La wareegay Dhamaan?…..
In badan baa laga hadlay dhibka Soomaaliya halkuu ku qotomo waase wax lawada arkayo in habargidir oo ah kuwa Hawiye ugu axmaqsan in Soomaaliya ay iyaga uun ka degi la’dahay waa 12 sano oo la sii dhaafayo intay xoolihii dadwaynaha ka dhexeeyay ay si sharci daro ugu tagri falayaan bal u fiirso iskuuladii, cusbitaaladii, xarumihii kalee caafimaadka, xarumihii dawlada haba sheegin kuligood dhulkaa lala simay waxaa marar badan xusuusanaynaa hadalkii shiinuhu yiri markay arkeen sida Soomaalida dhulkan geeska afrika siiba koonfurta Soomaaliya?….
Dhuusamareeb mar hadii AMISON lageeyay waxay noqon Xalane 2
“DHULKAN DADKII LAHAA AAWAY KUWAN MA LEHE” taasi waa su’aal wali maanta taagan oo ka turjumaysa hunguri xumada HABARGIDIR balaayo hala habro badnaatee.